KDE inopa Necuno Mobile, Smartphone ine Plasma Mobile | Linux Vakapindwa muropa
KDE inopa Necuno Mobile, Smartphone ine Plasma Mobile
Zvakawanda zvakataurwa pano mu blog pamusoro pechizvarwa chitsva chichava (kana zvirinani tinotarisira kuti vakawanda) ye Smartphones ine Linux natively yakaiswa pamwe neizvi, kuti tikwanise kunakidzwa neyedu inodiwa desktop desktop mune ino uye zvakare kuve neinotove yakakurumbira kusangana kweiyo Canonical yativimbisa neUbuntu Kubata.
Zvakanaka, nguva pfupi yadarika vanhu vaitungamira chirongwa che KDE nguva pfupi yadarika vakaunza iyo smartphone nyowani ine zita rekuti "Necuno Mobile" uye ndeipi zvechokwadi ine Shell Plasma Mobile.
Necuno Mobile ndeye Smartphone yakagadzirwa pamwe neNecuno Solutions uye yakapihwa firmware yakavakirwa paPlasma Mobile ganda.
Chishandiso chakamisikidzwa sepuratifomu yehardware ine firmware yakavhurika zvachose, yakanangana nekuvimbisa kuchengetedzeka uye kuvanzika kwevashandisi.
1 About Plasma Nhare
1.1 About Necuno Nhare
1.2 Necuno Mobile zvinoriumba
About Wiki Plasma Mobile
Plasma ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi graphical mushandisi interface yakagadzirwa ne KDE. Yayo Plasma Mobile chikuva kuyedza kuunza iyo Plasma graphical mushandisi interface kune nhare mbozha.
Plasma Mobile Iyo inovimbisa uye yechokwadi yakavhurwa sosi imwe nzira ye duopoly. Plasma Mobile yakavakirwa parunhare vhezheni yePlasma 5 desktop, iyo KDE Zvimiro zvemaraibhurari mashanu, iyo Voicecall / Ofono foni stack, uye iyo Telepathy yekutaurirana fomati.
Zvekuburitsa mifananidzo, iyo kwin_wayland composite server inoshandiswa. Plasma Mobile haina kusungirirwa kune yakaderera-chikamu chikamu cheiyo inoshanda system, ichibvumira chikuva kuti chishande pasi peakasiyana masisitimu anoshanda masisitimu, kusanganisira kuvhura paUbuntu / Neon, Arch Linux, postmarketOS, nezvimwe.
Ipuratifomu inotarisa pakuburitswa kwesoftware application yakanyorwa neQt 5 uye neKirigami yekukurumidza application application budiriro.
Iyo inotsigira kumhanya kweplasma kunyorera uye mawijeti eKDE Plasma desktop, pamwe nekugona kushandisa zvirongwa zvakanyorwa kune Ubuntu Kubata, Sailfish, uye Nemo mapuratifomu.
About Necuno Nhare
Sekureva kwemugadziri Necuno hapana zvakavharwa firmware zvinoriumba parunhare zvinopinda chikuru ndangariro dzechigadzirwa.
Sezvo ivo Ivo vano tsanangudza kuti iyo WiFi chip uye iyo baseband modem yakasarudzika uye haina mukana wekukoshesa ndangariro kana processor.
Kune FCC / CE chitupa, iyo isina chip chip inofanirwa kuve yakagadzirirwa neiyo organic firmware isingatenderi kuenda kupfuura yakatarwa frequency frequency, modulation mhando, uye masimba mazinga.
Kuvharira kuwanikwa kweiyo inonzi proprietary firmware kune ndangariro huru yechishandiso, zvakatemwa kubatanidza chip isina waya kuburikidza nebhazi re SDIO.
Kuvanzika uye kuchengetedzeka kwevashandisi vedu ndizvo zvakanyanya kutariswa neNecuno Solutions, uye tiri kushanda nenharaunda dzeFree Software kuona kuti Hardware inzvimbo yekutambira yemahara uye yakavhurwa sosi yekushandisa masisitimu mune nharembozha.
Plasma Mobile neNecuno mhinduro ndiwo mutambo wakaringana wekudyidzana munharaunda nekuda kwehunhu hwavo hwakagovaniswa maererano neyakavhurwa sosi, kuvanzika uye kuchengetedzeka.
Necuno Mobile zvinoriumba
Iyo Hardware yeiyo smartphone sIyo yakavakwa uchishandisa iyo NXP i.MX6 SoC ine quad-musimboti ARM Cortex-A9 processor uye neVivante mifananidzo yekuwedzera.
Zvese SoC i.MX6 zvinyorwa zvehunyanzvi uye zvikamu zveBSP zvakavhurirwa kurodha mahara uye kuongorora.
Ipuratifomu inogona kuitwa chete nerubatsiro rwemahara software, kusanganisira yemahara Etnaviv mutyairi weVivante GPU.
Dzakananga nharembozha Hardware iri seinotevera:
SoC: ARM Cortex-A9 NXP i.MX6 Quad
GPU: Vivante (Etnaviv)
5,5 padiki chidzitiro
3.5mm odhiyo kunze
Rudzi rwekuisa: Micro USB
WiFi (chip yakabatana ne SDIO)
Yakazara 100 Mbit / s Ethernet (!)
LTE yekubatanidza mhando.
Chigadzirwa yakagadziridzwa mukubatana pamwe neyemahara software yekuvandudza nharaunda uye pakutanga yaimisikidzwa senzvimbo yakanakisa yeakavhurika enhare anoshanda masystem.
Zuva rekutambira nhare pamwe nezuva rekutengesa uye mutengo uchaziviswa gare gare. Chigadzirwa chacho chakarongerwa kugadzirwa muFinland.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » KDE inopa Necuno Mobile, Smartphone ine Plasma Mobile
Zvinosuruvarisa kuti muno muLatin America tiri kure nerudzi urwu rwechigadzirwa. Izvo zvakaunzwa, mutengo wakachinjika wemari kusiyanisa uye kusawana musika wezvikamu unovaita kuti vasasvikike. Iwe unoona mafoni mashoma kubva kune asingazivikanwe mabhenji, ese ari Samsung, Huawei, Motorola, LG, Sony kana iPhone, zvese asi yekupedzisira iApple uye ivo vari kutiona isu kune mite.
Iwe unonyatsoda kumwe kuzvimirira uye kuzvimirira.
Paul Brown: zvinopfuura kubvunzurudza, hurukuro
AVAST: hurukuro yega yeLxA